Raphael Varane Oo Doonaya Inuu Dhameystiro Heshiiska Uu Ugu Biirayo Man United Maalmaha Soo Socda.
Home Wararka Ciyaaraha Raphael Varane oo doonaya inuu dhameystiro heshiiska uu ugu biirayo Man United...
Daafaca dhexe ee Real Madrid Raphael Varane ayaa lagu soo waramayaa inuu rajeynayo inuu dhameystiro ku biiristiisa xagaaga ee Manchester United maalmaha soo socda.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa u aqoonsaday 28 jirkaan bartilmaameedkiisa koowaad ee daafaca isla markaana wadahadalada labada koox ayaa si wanaagsan u socda .
Varane ayaa haatan fasax la jooga qoyskiisa, ka dib markii uu ka qeyb galay France Euro 2020, laakiin sida laga soo xigtay AS , daafaca ayaa doorbidaya inuu dhameystiro ku biiristiisa United maalmaha soo socda una duulo Manchester, halkii uu ku laaban lahaa Madrid xerada tababarka xilli-ciyaareedka hore.
Real ayaa raadineysa inay iska iibiso Varane xagaagan madaama qandaraaskiisa uu uga harsan yahay kaliya hal sano, mana jiraan wax tilmaam ah oo muujinaya inuu daafaca doonayo inuu qandaraaska u kordhiyo Santiago Bernabeu.
Labada dhinac ayaan ku deg degin dhameystirka heshiiska, inkastoo United laga yaabo inay dareensan tahay inay ku qasban tahay inay si dhaqso leh heshiiskan ula wareegto si ay u qanciso tababaraha reer France.
Varane wuxuu 10 sano ku qaatay Real Madrid, wuxuu duubay 360 kulan wuxuuna la qaaday 18 koob oo waa weyn, oo ay ku jiraan afar horyaal oo Champions League ah.
Previous articleArsenal oo kor u qaaday xiisaha ay u qabto Goolhayaha kooxda Barcelona Neto.
Next articleParis Saint-Germain oo sare u qaaday qiimaha ay ku dooneyso Xidigaha Paul Pogba